chiedza chakachena Fekitori | China yakachena mwenje Vagadziri, Vatengesi
aruminiyamu chiwanikwa misodzi inodonhedza misodzi-yekurapa, chikafu, hutsanana, magetsi, imba yakachena
Mumvuri wakareruka wakagadzirwa nemhando yemisodzi. Rambi rakabatana negwara kana yakasendekwa zvakasiyana, ine yekukurumidza yekubatanidza tambo mukati. Muviri wemwenje nenjanji zvinogadzirwa nesimbi simbi uye zvakavharwa nezvisimbi zvesimbi kuti ive nechokwadi chekuti mwenje nenjanji hazvidonhe. Inoshanda kune mushonga, hutano, chikafu, zvemagetsi uye zvimwe zviyero zvepamusoro zvekunatsa mwenje.
kirasi 1 kumashure kusimudza kana yakaderera yakavhurika mhando yakachena mwenje
Iyo mwenje inokwana zvakakwana iyo keel, uye iri nyore kuisa. Muviri wakareruka uye chivharo chekumashure chakazadzwa nekukwirira-kuwanda chisimbiso. Hapana guruva, nyore kuchenesa, hapana kupenya, chifukidziro chekumashure chinotora gonhi rakavhurika mhando, rakagadziriswa nemhando yepamusoro bhakoro, iri nyore kuvhura nekuvhara, iri nyore kuchengetedza, yakazara saizi yekukanganisa iri pasi pe +/- 1mm, flatness inoenderana neJS141.
Chiedza chemuviri chakagadzirwa nemupendero weveveled kuitira nyore kuchenesa uye kutaridzika kutaridzika. Iyo yakagadzirirwa girazi rinoratidza. Mumvuri wakareruka wakabatana nemuviri wakareruka nerwendo rwepamusoro rwekusimbisa. Inokodzera kuvhenekera yemagetsi musangano, yemishonga musangano uye yakakwira standard yakachena semusangano.
kirasi 1 yakadzokororwa mhando yakachena mwenje
Chiremba akachena mwenje wekurapa mashandiro mukamuri ICU
Chiedza chemuviri dhizaina kadhi yero, inotaridzika chitarisiko, yakavakirwa-mukati girazi inoratidzira, luminaire furemu dhizaini 45 degree yakatenuka, yakanaka, iri nyore kuchenesa; Iko kubatana pakati pemumvuri wemwenje nemuviri wemwenje kunotora yepamusoro yekuisa chisimbiso tambo; Ukuru hwerambi hunogona kugadzirwa. Yakagadziriswa marambi akachena, akakodzera kuchipatara chekuvhiya, ICU wadhi, nezvimwe.
simbi isina kuchena inotonhora yakavharidzirwa pani kirasi 1 mwenje wakachena
germicidal mwenje haidi kuti ishandurwe kuve mwenje unooneka, iyo wavelength ye253.7 nm inogona kuve nemabatiro akanaka kwazvo ekudzivirira, izvi imhaka yekuti maseru emitsara yekutsvaira mwenje pane mutemo, mu250-270 nm ultraviolet ray ine mukana wakakura kwazvo, yakatora ray ultraviolet muchimiro mune maseru emagetsi maumbirwo kana DNA, inoridza allochromatic, ultraviolet photons simba rinosvitswa nepasi peya eDNA, rinokonzeresa kushanduka kwemajini, kuita kuti mabhakitiriya afe ipapo ipapo kana kutadza kubereka, kuzadzisa chinangwa chekuita mbichana.